Na-ege ntị Spotify Music Free Via Spotify 3 monthsFree
Na-ege ntị Spotify Music Free site Spotify 3 Ọnwa ole na Free
1. Gịnị si Spotify ọnwa 3 free
2. Esi etinye Spotify ọnwa 3 free
3. Olee otú ige ntị music free mgbe Spotify ọnwa 3 free
Gịnị si Spotify ọnwa 3 free
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ nke Spotify ụlọ ọrụ na-mgbe ọ na-enye ohere ọrụ iji na-enweta ọrụ na-ndị kasị mma na n'otu oge ọ bụkwa kwalite ọrụ ka elu ọkọlọtọ iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye nhọrọ nweta nkwalite ihe ndekọ dị ka mma. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị-aga n'ihi na doro ego bụghị nanị ime ka music ndụ dịkwuo mfe kamakwa iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ndibiat nke ahịa. The nkuzi ga-akụziri onye ọrụ otú ime ya mfe:
Atụmatụ nke ego
Onye ọrụ ọkọkpọhi ego nke fọrọ nke nta $ 9 kwa ọnwa nke mbụ ọnwa atọ mgbe ha edebanye maka ọrụ ma ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma e nyere na ngwaọrụ na bụ na iji dị ka nke a price nke adịchaghị ọnọde onye ọrụ na-akparaghị ókè ad free ngakọrịta na onye ọrụ dị nnọọ nwere ime ihe ọ bụla na inweta a na-enye ma nwere edebanye maka adịchaghị atụmatụ maka oge mbụ. Ee nke a bụ catch na-enye bụ na ọdabara ọhụrụ ọrụ naanị na ha nwere ike ime n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe atụmatụ na-enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na nke kacha mma e nyere site na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla na ha amaghị ihe ndị bụ eziokwu na onu ogugu enwere ugbua mgbe ahụ Ewoo ha Agbaghara a nnukwu ohere. Ọ na-na--ahụ kwuru na ọrụ na onye ga-esi otú ahụ ọkaibe functionalities enweghị ihe ọ bụla ọzọ ebubo na ndị ọzọ na-eji na ọnụego nke 9,99 kwa ọnwa mgbe ọ na-abịa adịchaghị atụmatụ. Na nke a atụmatụ dị nnọọ ka nkịtị onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na 3 ngwaọrụ na-synced maka offline ojiji na a na-ege ntị nwekwara ike eme n'out oge enweghị ihe ọ bụla ọzọ a chọrọ ka e agbakwunyere n'ime ọrụ ahụ.
Uru nke na-eji atụmatụ
Ndị mbụ na ndị mbụ uru na a onye ọrụ nwere ike na-enwe na nke a bụ eziokwu ahụ bụ na ego na-echekwa na onye ọrụ na-fọrọ nke nta na-azọpụta $ 27 maka 3 ọnwa nke atụmatụ ka tụnyere nkịtị adịchaghị atụmatụ na a na-eji dị ka mma.
Ọ na-emekwa onye ọrụ na-ele ukwuu dị ka ọkọlọtọ nke ọrụ bụghị e deprecated na onye ọrụ bụ ike eji ọrụ enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ hassle nke na otu mmụọ na ịnụ ọkụ n'obi nke nkịtị adịchaghị ọrụ. Ọ bụ otu n'ime ihe kasị mma amụọ na ga-ekwe ka ụlọ ọrụ na-eme ka n'aka na ahịa isi na-amụba na ọhụrụ ndị ahịa na-ịrafu azụmahịa. Ọ ga-emekwa n'aka na ọrụ na-n'aka-akwụ $9.99 kwa ọnwa mgbe na ndenye aha na nsọtụ. Ọtụtụ ndị ọzọ uru bụ n'ebe na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ndị a na-enwe site na ịga na ukara Spotify website.
2. Olee otú itinye Spotify ọnwa 3 free
Usoro a ga-soro na nke a bụ n'okpuru:
1. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na kaadị na-aha iji jide n'aka na usoro Ọganihu ka adịchaghị na akaụntụ achọ a kaadị:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị nbanye akaụntụ iji jide n'aka na usoro Ọganihu:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na koodu na e nyere maka nkwado zuo odụk na ọ bụ-ahụ kwuru na ndị a Koodu na-site mgbe onye ọrụ ẹyak tinyekwa na ihe ịrịba ama elu maka adịchaghị atụmatụ akpa ini:
4. The Spotify bụ mgbe ahụ na-eji na ala na afọ ojuju:
N'okpuru ebe a bụ ụzọ na a ga-eji na nke a na-arụpụta ihe kasị mma
1. Iji FB
a. The Facebook akaụntụ bụ na-enweta:
b. The n'ụlọ peeji a na-ahụ ka a bịa na:
c. Ngwa a na-ahụ na-kwukwara:
d. Malitegharịa ekwentị ahụ na nchọgharị ịrụcha usoro:
2.-anọghị n'ịntanetị mode si iPhone
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a:
a. The ngwa nke na ozi dị ike ibudata:
b. The akaụntụ bụ ite ke:
c. The listi ọkpụkpọ na-ahụ ka a ga-enweta na-eme ka n'aka na isi usoro amalite:
d. The playlist a na-ahụ na-ebudatara na ngwaọrụ ịrụcha usoro:
3. Android Usoro
Ọ bụ ime ka n'aka na android ahịa na-weghaara na iji jide n'aka na ihe kasị mma na-eme usoro na e kwuru n'okpuru bụ a ga-agbaso na-eme ka n'aka na needful na-eme na ala na afọ ojuju:
a. The edit offline playlist nhọrọ bụ ga-ahọrọ iji jide n'aka na usoro Ọganihu ka anya dị ka ngwa e nwere agbam onya:
b. The playlist ahụ bụ na ajụjụ bụ na-pịrị iji jide n'aka na usoro na-aga n'ihu:
c. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na offline mode na-ahọrọ na maka otu ihe ahụ onye ọrụ ga-enwe ike na-ege ntị music n'efu na ọbụna mgbe nkwado oge nsọtụ:
Usoro a kwuru ka ndị a:
a. Ụda edekọ bụ ike ibudata na arụnyere:
c. Ebudatara omume a na-ahụ na-ulo oru:
d. The song a na-ahụ na-egwuri:
e. The songs ga-ebudatara na chọrọ format dị ka onye ọrụ chọrọ ka ha na-:
5. Desktọpụ Atụmatụ na usoro
Usoro dị mfe ma ga-agbasoriri iji jide n'aka na needful a mere:
a. The Spotify website bụ a ga-emeghe:
b. The akaụntụ a na-ahụ na-kwalite:
c. Desktọọpụ ahịa a na-ahụ na-ebudatara na-ege ntị na songs na imecha usoro na zuru:
> Resource> Music> Gee Spotify Music Free Via Spotify 3 Ọnwa ole na Free